Danjire Nicholas Haysom Oo Ku Sugan Garoowe, Kuna Soo Waajahan Magaalada Hargeysa Iyo Xiisadda Tuke-Raq Oo Uu Kala Hadlay Labada Madaxweyne – somalilandtoday.com
Danjire Nicholas Haysom Oo Ku Sugan Garoowe, Kuna Soo Waajahan Magaalada Hargeysa Iyo Xiisadda Tuke-Raq Oo Uu Kala Hadlay Labada Madaxweyne
(SLT-Hargeysa)-Ergayga xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta gaadhay magaalada Garoowe ee xarunta maamul gobolleedka Puntland, waxaanu kulan la yeeshay Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdweli Maxamed Cali Gaas.
Kulanka dhex-maray madaxweyne Gaas iyo Nicholas Haysom ayaa waxa lagu soo waramayaa in lagaga hadlay sidii loo dajin lahaa xiisad dagaal ee u dhexeysa maamulka Puntland iyo Somaliland kuwaasoo weli isku hor-fadhiya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Somalia Amb Nicholas Haysom ayaa la filaya in uu yimaaddo magaalada Hargeysa si uu kulan ula qaato madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabd.
Danjire Nicholas Haysom oo horaantii bishii September loo magacaabay jagada waxa uu xilka la wareegay kowdii bishii October waana markii u horaysay ee uu Somaliland yimaaddo. Waxa jagada uga horeeyay Michael Keating oo muddooyinkii dambe aanay isku fiicnayn Somaliland kadib markii la isku fahmi waayay arrinta Tukaraq oo xasaasi ahayd iyo arrimo kale oo ku saabsan siyaasadda u dhexeysa Somalia iyo Somaliland.
Warar xogogaal ah oo Somalilandtoday.com ka helayso socdaalka Danjire Nicholas ayaa sheegaya in uu madaxweyne Biixi kala hadli doono arrimo ku saabsan xidhiidhka siyaasadeed ee Somaliland iyo Somalia siiba colaadda Tukaraq iyo wada hadalladii labada dhinac iyo doorka xafiiskiisu ka ciyaari karo. Sidoo kale waxa suuro gal ah in uu arrimaha doorashooyinka kala hadlo madaxweyne Biixi.
Hadda su’aasha meesha taalla waxa ay tahay Madaxweynaha Somaliland iyo Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Somalia Amb Nicholas Haysom ma isku fahmi doonaan xalinta arrinta xiisadda Tuke-raq
Danjiraha cusub oo ah nin Ingiriis ah, islamarkaana haysta dhalashada Koonfur Afrika waxa uu muddo dheer la soo shaqeeyay Qaramada Midoobay isaga oo hadda ahaa wakiilka Qaramada Midoobay ee Koonfurta Suudaan iyo Suudaan.